Miidhaa saaybarii - BBC News Afaan Oromoo
...tti maxxanfame 11:45 14 Sadaasa 202111:45 14 Sadaasa 2021
FBI kaadimtuu keessootiin imeeliin sobaa kumaatamni itti ergame
Eejjansichi erga ergaawwan iimeelii kumaatamni haleellaan saayibarii raawwatamu akka hinoollee itti ergameen booda qorannoo eegale.
...tti maxxanfame 4:12 19 Hagayya 20214:12 19 Hagayya 2021
Namichi TikTok irratti fuula dhokfatee namoota jibba barreessan saaxilu, eenyu?
Nama eenyummaakee dhoksuun intarneeta irratti jibba barreessitu yoo taate, namni kun sodaakee isa guddaa ta’a.
...tti maxxanfame 5:40 1 Hagayya 20215:40 1 Hagayya 2021
...tti maxxanfame 8:38 22 Adooleessa 20218:38 22 Adooleessa 2021
Lakkoofsi bilbilaa intala mootii Dubaayi mosaajii basaasaa keessatti tarreeffamee argame
Lakkoofsi bilbilaa maatii warra mootii Dubaayi lama qorannoo mosaajii bilbila butuuf oolu Pegasus keessatti tarreeffamee argame.
...tti maxxanfame 6:50 21 Adooleessa 20216:50 21 Adooleessa 2021
Pireezidant Maakiroon haleellaan saayibarii basaasaa irratti qiyyaafatame
Hoggantoonni biyyootaa garaa garaa tarree bilbila namoota 50,000 maamiltoonni dhaabbata ‘NSO Group’ akka basaasamu barbaadu jedhame yaadamu keessatti eeramee jira.
...tti maxxanfame 7:56 20 Adooleessa 20217:56 20 Adooleessa 2021
Chaayinaan haleellaa saayibarii Microsoft irraatti raawwachuun himatamte
UK, Ameerikaafi Gamtaan Awurooppaa, jalqaba bara kanaatti haleellaa saayibarii jabaa raawwatte jechuun Chaayinaa himatan.